नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : NRNA: बिधी, बिधान सबै कुल्चँदै पद र भागबण्डामा लिप्त, नेपाली फोहोरी राजनीतिको पूर्ण शिकार, देख्दै लाज लाग्ने हर्कत !
NRNA: बिधी, बिधान सबै कुल्चँदै पद र भागबण्डामा लिप्त, नेपाली फोहोरी राजनीतिको पूर्ण शिकार, देख्दै लाज लाग्ने हर्कत !
NRN हरूलाई त्यस्तो साझा संस्थाको जरुरी छ जहाँ परदेशमा रहेका सबै नेपालीहरू अट्न सकुन्, नेपाल र नेपालीलाई जोड्ने एउटा पुल बनोस् त्यो संस्था, स्वतन्त्र नेतृत्व होस, सबै अटाउने छानो होस । एमालेको प्रवासी मञ्च, काँग्रेसको जन सम्पर्क समिति, माओवादी देखी अरू पार्टीका भातृ सङ्गठन जस्तै बनाउने हो भने, अहिलेकै
जस्तै यस्तै गाईजात्रा देखाइरहने हो भने NRNA विघटन गरिदिए हुन्छ । हामीलाई यो संस्थाका सदस्य हुँ भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था आयो मित्रहरू । विधि, विधान सबै कुल्चँदै पद र भागबन्डामा लिप्त, कोठा भित्र बसेर केही थान मान्छेले गरेको निर्णय हामीले मानिदिनुपर्ने ?? फोहोरी राजनीतिको पूर्ण सिकार, देख्दै लाज लाग्ने हर्कत ! यो त हद पनि पार भयो, खोइ हाम्रो पहिलाको NRNA कता गयो ?? उपेन्द्रजी, जीबाजी, तपाईंहरु पनि बोल्नु पर्दैन र ??